Isku day inaad eegin keyboard ah. Waxa ay noqon doontaa ugu adkaatey, laakiin sida aad horumar bilaabin layliga, waxaad ka heli doontaa waxa uu noqonayaa mid fudud iyo farahaaga bilaabi doonaan inay u guuraan iyaga oo aan aad u kac ay go'aansan farta waxa uu la xidhiidhaa taas oo muhiim ah.
Sida aad ka baran in ay ku qorato, fiiri kor ku keyboard ay u arkaan taas oo farta si ay u isticmaalaan. Ha ka cabsan in aad khalad sameyso - haddii aad samayn, barnaamijka wuxuu idin tusin furaha sax ah si aad u isticmaasho. Haddii furaha waa xaq, waxay muujinaysaa cagaaran, haddii uu khaldan yahay - ka dibna casaan.
Isla markiiba isku dayaan in ay soo bandhigto aqoonta barteen oo qayb ka ah hawl-maalmeedkaaga, kombiyuutarka, ma jirto wado ka wanaagsan sidii aad u baran makiinada.
Samayso jadwal. Ilaa aad dhiso jadwal waxbarasho, waxa ay sidoo kale si sahlan u heli marmarsiiyo u ma barbaran waa.
Isha ku hay tirada khaladaadka aad samayn oo diirada saaro yaraynta qaladaadkaaga in baaritaano mustaqbalka halkii kordhinta tirada xawaaraha makiinada. Natiijada dhamaadka waxaa lagu kordhin doonaa soo saarka.
Waxaad caawin kartaa in aad si aamusnaan dhihi magaca furaha sida aad u dharbaax. Ha qaladaadkaaga waxaan idiin qalbi jabin, makiinada taabto waa xirfad ku baran kartaa adigoo dhaqanka.
Dulqaad. Marka nidaamyada saxda ah farta-keystroke waxaa lagu bartay, xawaaraha iyo saxsanaanta si dabiici ah.
Kaliya farta loo baahan yahay in ay weeraraan fure u dhaqaaji. Ha u ogolaan in Farahaaga kale inay ku wareegaan meel ka baxsan xilsaaray Furayaalkiisu ku xigta guriga.
Faruhu waa in uu xukunka isku xigta guriga iyo gacmahaaga waa slant xagal la mid ah sida keyboard ah. Ha u ogolaan cumaacumaha noqon caajis iyo inta ka dhan ah miiska ama keyboard ah.
Layliska jimicsi kasta dhowr jeer ilaa aad ku qanacsan tahay xirfadaha makiinada aad.
Ha kadinka furaha. Isku day in ay xoog isticmaalaan sida ugu macquulsan. Is dabci inta u dhexeeya erayada by nasasiiyay dhan toban farood dushiisa ah furayaasha.
Si aad u nasato gacan aan furayaasha ku teedsan, hoos u dhan shan farood isku mar meel kasta oo dusha keyboard ah.
Taabo calaamadda muhiimka ah kasta ee sida sahlan laakiin crisply la mid farta waqti, daryeelka aan si lama filaan ah u milicsan furaha la filayn.
Si aad u bilowdo auto-celiyaan, taabto oo midkoodba farta ku furaha la doonayo. Kor u farta si ay u joojiyaan auto-celiyaan.
Kulan aad qortid waa dariiq madadaalo si aad u hagaajisid xawaaraha makiinada iyo saxsanaanta. Hayso xiiso leh halka aad ka baran!
The layliyo isuduwidda farta iyo layliyo stress yaraynta caawin doonaa yareeyo khilaafka oo ay inta badan ku riday dhoola on wajigaaga. Eryeey A farxad iyo jawi wanaagsan oo kaa caawin kara in waxbarasho xiiso leh.
Hubi in aad u ogolaato ugu yaraan 30 daqiiqo ee kasta.
Hubi in aad sii farahaaga sida ugu dhow in ay meel guriga ka badan iyo sida ay u yareeyaan dhaqdhaqaaqa gacanta aad inta aad wax baraneyso.
Barashada nooca waa dhan oo ku saabsan samaynta khaladaad, markaa ha niyad jabin haddii aad ku dhuftey fure u khaldan.
Isku day inaad nooca la xawaare joogto ah.
Dhifto cumaacumaha caawin doona in la hubiyo farahaaga hoos u baxaa karo oo si degdeg ah oo sax ah ku dhacay furayaasha.
Si aad u kala bedesho sare hoos u isticmaalka / case mar walba gacanta ka soo horjeeda. Fiiro Gaar ah: waraaqaha ku saabsan qaar ka mid ah teebabka laptop noqon kartaa isu dhowaadaan.
Ka keyboard ka hubi meel fog. Habee kursi si looga fogaado dhibaato caadi ah - oo fadhiya meel u dhow keyboard ah. Dheellitir xagal ka mid ah, kormeeruhu si loo yareeyo horuu.
In badan oo aad ku dhaqmaan, si wanaagsan ayaad ku garaaci doona iyo kordhiso xowliga.
Haddii aadan si cad u ogtahay meesha warqad ama furaha tiro waa, ma awoodi doonaan in ay u daabacaan ayadoon la eegeyn hoos ugu keyboard ka.
Haddii ay suurtagal tahay, isku day inaad ku baraktis ku keyboard joogto ah oo aan keyboard laptop ah.
Noqo raaxo leh aad keyboard iyo hubi in ay tahay dhererka saxda ah farahaaga.
Inta aanad bilaabin baaritaanka xawaaraha makiinada aad ayaa si toos fadhiya hubiyaan, cagahaaga guri dabaqa. Xusulladaada u soo dhawaado jidhkaaga, oo aad cumaacumaha si toos ah iyo heerka dhaqin iyo xasuuso inaad ka nasto.
Layliyo nasta ka: fidi farahaaga ka mid ah labada gacmood fog laga reebo. Ku hay ilaa shan ilbiriqsi, ka dib aad nasato. Ku celi wadar ahaan saddex jeer.
U hubso in aad cabirto xawaaraha makiinada xilliyo - la noo qalab aad ka eegi kartaa horumarkaaga ee xawaaraha iyo saxsanaanta labada ahaan markii aad baratid. Tirada daqiiqadii erayada muujinaysaa heerka makiinada aad.
Baaritaano teeb lagu cabiro laba wax, xawaaraha iyo qalad, si marka aad haduuna imtixaanka xawaaraha makiinada, ma eegto kaliya ee aad xawaaraha.
Haddii keyboard yahay mid aad u sareeya (kursi aad u hooseeyo) khaladaad u muuqdaan in ay dhacaan in ay saf ugu sareeya keyboard. Haddii keyboard uu yahay mid aad u hooseeya khaladaad (kursi aad u sareysa) waxay u muuqdaan in ay dhacaan ku saf keyboard hoose.
Layliyo nasta ka: In aad gacanta lagu meeleeyo meel ka mid ah in loo kordhiyo gacanta, si tartiib ah cadaadis isticmaalaya gacanta kale inaad suulka ballaaran ee dib a iyo jihada, midhona. Ku hay ilaa shan ilbiriqsi oo nastaan. Tan ku celi saddex jeer gacanta.
Waxay u baahan tahay waxaa laga yaabaa in a toddobaadkii ama laba si aad u hesho xawaaraha ~ daqiiqadii 50 erayada haddii aad isticmaalaysid 30-60 daqiiqo maalin kasta. Dulqaad.
Fidi cumaacumaha iyo farahaaga ka hor intuusan bilaabin baaritaanka makiinada ah.
Haddii aad rabto in aad qortid fudud, waa in aad u sii wanaajin ah xarumha. Waxay kaa caawinaysaa haddii aad u ciyaaro gitaarka ama qalab kale oo u baahan in aad gacmahaaga.
Layliyo nasta ka: farahaaga taag labadaba hubka dibadda u wada iyo goobada oo la gaemihiinnee hana qoqobada gacanta. Shan wareegyada in hal dhinac, kaddibna shan dhinaca ka soo horjeeda.
La sheekeyso asxaabta iyo qoyska.
Dhamee cashar kasta, markaa isku day imtixaanka xawaare.
Marka barashada in nooca, waxaa aad muhiim u ah in aad ku eekaan jadwal joogta ah ee dhaqanka ama farahaaga bilaabi doonaan in ay lumiyaan xasuusta muruqa ah.
Layliyo nasta ka: gacmahaaga ku qabo aragba la Timir jeeda hoos. Kor gacmahaaga kor u badan marba dhan laguu sheegaya qofka inuu joojiyo. Adigoo isticmaalaya gacanta ka soo horjeeda, cadaadis si timirta ahaa oo gacanta lagu soo qaaday. Ku hay cadaadiska shan ilbiriqsi, ka dib aad nasato. Ku celi wadar ahaan saddex jeer gacanta.
Haddii aad baran in ay si dhakhso ah ku qor halka eegaya keyboard, waxaad sii wadi doontaa in ay waqti adag la khalad aad qortey oo yeeris markaad dibadda u baxdaan galay xaaladaha dhabta ah teeb sababtoo ah ma waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan qalad ah shaashada.
Maradu shukumaan gacan ka badan gacmahaaga halka aad ku qorato.
Bilow gaabis iyo barto keyboard oo dhan ka hor inta aadan baran in ay si dhakhso ah ku qor.
Haddii aad makiinada wuxuu sababaa xanuun, dhaqsiyaha badan u joojiyaan oo u naso.
Haddii aad baranayso xagga cimilada shaqada ah, isku day in aad la xaajooto cidda aad u shaqaynayso Wuxuu Mr.Haguf maalintii si uga dhigeen si loogu waxbarashadaada - aad u shaqayso si toos ah ayaa ka faa'iideysan doona xirfadahaaga cusub.
Waxa habboon in aad ka fogaato joogi in kaliya waqti kordhin. Gooysaa, oo aad maalin hawlaha talantaalli ah markii ay suurtagal tahay.
Waxay kaa caawin karaan in aad isticmaasho qalabka digniinta ah in aad is xasuusisid in ay qaataan biririf ka keyboard.
Layliyo nasta ka: Ku hay cududda muuqataana, iyadoo timirta jeeda hoos. Rid gacanta u ekayd gacanta. Isticmaalka timirta ahaa oo gacanta ka soo horjeeda, cadaadis in ay dib gacanta hoos. Ku hay cadaadiska shan ilbiriqsi, ka dib aad nasato. Ku celi saddex jeer gacanta.
Sida isticmaalka computer ayaa labada korodhay ee goobaha shaqada iyo guriga sanadihii ugu dambeeyey Dhaawaca taagin Soo noqnoqshada waxa uu noqday lala xiriiriyo isticmaalka keyboard.
Si loo yareeyo halista dhaawacyada xad dhaafka soo koraya waa in aad raacdo habka xilgudashada ugu habboon idinkoo Sujuudsan, farsamo, workstation dhigay-up iyo nasto.
Your curcurka, suxullada iyo keyboard waa in diyaaradda isla siman iyo xagal 90 digrii ah si gacmahaaga sare ah. Sare ee shaashadda waa in indhaha u dhow.
Ha fiirin keyboard marka aad ku qorato. Just farahaaga ku qabato agagaarka inta ay ka helayaan ay calaamad ah isku xigta guriga. Ha dubbe on furaha. Isku day inaad la adeegsanayo xoog sida ugu macquulsan.
Guusha iyo horumar ku xidhan yihiin go'an inuu ku soo shirtagi makiinada taabto ka dib markii aad dhamaysay barashada. Ee ah kuwa ka welweli karaan, ka fiirsan oo aad u soo kaban doono in ka badan waqtiga barashada in dhowr toddobaad ka-saarka.
Waa inaad sidoo kale waxay bartaan inay si wadajir ah u isticmaalaan xukunka ugu weyn ee la xukunka Ctrl iyo Alt - waa mid aad waxtar u leh tuuryo keyboard.
Adeegsiga in xaaladaha dhabta ah nolosha waa hab fiican oo dheeraad ah loogu qaado xirfadahaaga iyo dhisto kalsoonida.
Waxaad sameysaa tababar joogta ah la 'Speed ​​baaritaan' si aad u hagaajisid xawaaraha makiinada.